Barnaamijka Isku-dhafka Mentor-Ururka Xarumaha Qoraalka Caalamiga ah
IWCA Mentor Match Program wuxuu bixiyaa fursado latalin xirfadlayaasha xarunta qoraalka. Barnaamijku waxa uu dejiyaa tartamo la-taliye iyo la-taliye ah, ka dibna lammaanahaasi waxa ay ka wadahadlaan hadafkooda ka-qaybgalka barnaamijka, go'aamiyaan siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu gaari karo yoolalkaas, oo ay qeexaan cabbirrada xiriirkooda, oo ay ku jiraan kanaalada isgaarsiinta ugu habboon iyo inta jeer ee waraaqaha. Sababtoo ah barnaamijku wuxuu qaataa hab aan caadi ahayn, hagayaasha iyo la taliyayaasha waxaa lagu dhiirigelinayaa inay wadaagaan macluumaadka oo ay midba midka kale wax ka bartaan, sidaas darteed, labada dhinacba waxay ka faa'iideysanayaan xiriirka latalinta.
U-qalmitaanka iyo Waqtiga
La-taliyayaasha iyo la-taliyayaasha waxay siin karaan taageero kala duwan midba midka kale. Waxay noqon karaan:
Midba midka kale u tixraac kheyraadka.
Isku xidhka asxaabta caalamiga ah, qaran ahaan, iyo gobolkooda.
Kala tasho horumarinta xirfada, dib u eegista qandaraaska, iyo dalacsiinta.
Bixi jawaab celin qiimeyn iyo deeq waxbarasho.
U adeego sidii dib-u-eegis dibedda ah ee qorista qiimeynta xarunta.
U adeegso tixraac ahaan dallacsiinta
Kursi ahaan ugu adeego sabuuradaha shirarka.
Ka jawaab su'aalaha cajiibka ah.
Soo bandhig fikrado dibadda ah oo ku saabsan xaaladaha.
Dhammaan xubnaha IWCA waxay xaq u leeyihiin inay ka qaybqaataan IWCA Mentor Match Program. Barnaamijku waxa uu ku socdaa wareeg laba sano ah, wareegga ku xiga ee Mentor Match waxa uu bilaabmi doonaa Oktoobar 2023. Isku-dubaridaha IWCA Mentor Match Co-Co-Co-Co-Co-Co-Co-Coordinators waxa ay u diri doonaan sahan dhammaan xubnaha IWCA Ogosto 2023 iyaga oo ku martiqaadaya inay ka qayb qaataan barnaamijka. Sahanku waxa uu waydiinayaa dhawr su'aalood oo ku saabsan yoolalka xubinta IWCA ee ka qaybgalka barnaamijka iyo machadkooda. Isku-dubaridayaashu waxay si taxadar leh u eegaan macluumaadkan si ay u waafajiyaan lataliyeyaal iyo hagayaal leh hadafyo iyo/ama machadyo isku mid ah. Haddi Iskuduweyaashu ay awoodi waayaan inay la jaanqaadaan lataliye ama horjooge, waxay ku dadaali doonaan sidii ay u heli lahaayeen lataliye ku habboon, u abuuraan koox lataliye ka qaybgalayaasha aan isbarbar dhigin, iyo/ama ku xidhi doonaan agabka xarunta qoraalka dheeraadka ah.
Haddii aad xiisaynayso ka qaybqaadashada isdhexgalka latalinta ee ka baxsan wareeggayada labada sano ee caadiga ah, fadlan la xidhiidh Isku-duwayaasha (eeg macluumaadka xidhiidhka ee hoose) si aad u ogaato fursadaha jira.
"Inaan noqdo lataliye barnaamijka IWCA Mentor Match wuxuu iga caawiyay inaan si xeel dheer uga fakaro waaya-aragnimadayda, waxay u horseedday xiriir xirfadeed saaxiibkey qiimeeya, waxayna igu dhiiri-galisay inaan ka fiirsado sida latalinta xirfadeed ay ugu horseedayso aqoonsi edbin.
Maureen McBride, Jaamacadda Nevada-Reno, Mentor 2018-19
Aniga ahaan, jaaniska aan qof kale ku waaniyo ayaa lahaa waxtarro yar. Waxaan awooday inaan horey u bixiyo qaar ka mid ah taageerada cajiibka ah ee aan si aan rasmi ahayn u helay sanadihii la soo dhaafay. Xiriirka aan la leeyahay menteekeyga wuxuu kobcinayaa goob waxbarasho oo wadaag ah halkaas oo aan labadeenaba dareemo in lagu taageeray shaqada aan qabanno. Qabsashada booskan runtii muhiim ayey u tahay kuwa naga mid ah ee dareemi kara go'doomin lagu sameeyo hay'adaha gurigeenna ama waaxyaha silo-ed.
Jennifer Daniel, Jaamacadda Queens ee Charlotte, Mentor 2018-19
Barnaamijka IWCA Mentor Match waxa uu bixiyaa dhacdooyin taxane ah sannad kasta oo loogu talagalay la-taliyeyaal iyo horjoogayaasha. Fadlan soo booqo IWCA Mentor Jadwalka Dhacdooyinka Match si aad u aragto liiska dhacdooyinka hadda.
Haddii aad hayso su'aalo ku saabsan Barnaamijka Isku-Darka IWCA Mentor, fadlan kala xidhiidh Isku-duwayaasha Isku-Darka IWCA Mentor Maureen McBride ee mmcbride @ unr.edu iyo Molly Rentscher molly.rentscher @ elmhurst.edu.